မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး | MyanCare
by myatlynn | Aug 5, 2020 | မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး
လူဖြစ်လာရင်တော့ လိင်ကိစ္စဆိုတာမလွဲမသေကြုံလာရတာပါပဲ။ အခန့်မသင့်လို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေ၊ လူမှုရေး ပြသနာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ တယောက်ထဲ ကြိတ်ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ တခါတလေမှာမရှင်းနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေးတို့ အပေါ်လက်တို့ပေးစာ
by myatlynn | Aug 6, 2020 | မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး
ဆရာဝန်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေးတို့ အပေါ်လက်တို့ပေးစာ…. လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်တော့ လိင်ကိစ္စဆိုတာ တနေ့နေ့မှာ ကြုံလာရတာပဲလေ။အိမ်ထောင်သည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊သမီးရည်းစာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကိုကြီးတို့ နိုင်ငံကလဲ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေကြောင့် ဒီကိစ္စအပေါ်ကို မပွင့်မလင်း...
မြန်မာ့အယူအဆနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ____________________________________ မြန်မာဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အင်မတန် သိမ်မွေ့သော အင်မတန် ယဉ်ကျေးသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဟု မြန်မာတို့ဘာသာ မှတ်ယူထားကြသည်။ “ဗိုင်းကောင်း ကျောက်ဖိ” “ပုဝါတစ်ကမ်း...
သန္ဓေတားခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ❔ သန္ဓေတားတယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ် အရပ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီလို ကလေးမရအောင် ကာကွယ်ကြရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ စုံတွဲ၂ယောက်လုံး ပါဝင်ပတ်သက် ဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲ။ အများအားဖြင့် သန္ဓေတားတဲ့ကိစ္စကို...
ဦးဦးကိုကို ဆီသို့… ဦးဦးကိုကို တွေအတွက် မိမိတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသားပြသနာလေးတွေ ရှိပါက လုံခြုံစိတ်ချစွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ပြသဖို့ ဆရာဝန် တစ်ယောက် လိုအပ်နေပါသလား? အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ပြသနာတွေ ၊ အမျိုးသား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်တွေနဲ့ MyanCare...
အံဆုံးပေါက်လို့ နာတဲ့အခါ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
In ကလေး ကျန်းမာရေး
အာဟာရဓာတ် အပြည့်ရအောင် ကလေးငယ်တွေကို ဖြည့်စွက်စာ ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ
ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
အိမ်အမှတ် – ၂၁ / ၅(ဃ) သီရိမင်္ဂလာ ရိပ်သာလမ်း, ရန်ကင်းမြို့နယ် , ရန်ကုန်တိုင်း
(+၉၅) ၉၇၉ ၈၁၁၅ ၅၆၆